यौनसम्बन्धले बढाउँछ रोग प्रतिरोधी क्षमता ? - jagritikhabar.com
यौनसम्बन्धले बढाउँछ रोग प्रतिरोधी क्षमता ?
‘सेक्सगर्नुहोस्, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ ।’ के तपाईंलाई डाक्टरले यो सल्लाह दिएका छन् । पक्कै दिएका छैनन् । तर एरिजोनाका चिकित्सक फेथ कोट्सले यो सल्लाह दिएका छन् । ती डाक्टरले आफ्नो सल्लाहलाई उनको कक्षमा सीमित गरेनन्, इन्टरनेटमा समेत फैलाए । कोट्सले टिकटकमा एउटा भिडियो बनाए । उनले आफ्नो ६ लाख १८ हजार फलोअर्सबीच यो खुलासा गरेका हुन् । उनका एक प्रशंसकले सोधेका थिए, ‘ओर्गास्मले हामीलाई बिरामी हुनबाट बचाउँछ, यो साँचो हो कि गलत ?’
जवाफमा, कोट्सले भिडियो साझा गरे। यसमा उनी भन्छन्, ‘सत्य, कम्तिमा हप्तामा एक वा दुई पटक यौन सम्पर्क राख्दा प्रतिरक्षा प्रणालीले ३० प्रतिशत राम्रो काम गर्दछ । यो डाक्टरहरूको सल्लाह हो ।’ कोट्सले जे भने त्यो भन्ने कुरामात्र पनि होइन । विभिन्न पत्रिकामा यसबारे शोध प्रकाशित भएका छन् । अनुसन्धानमूलक आर्टिकलमा सेक्स वा स्वस्थ यौन सम्बन्धका धेरै फाइदाबारे छन् । कहिलेकाहीँ यसले प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ, कहिलेकाहीँ मुटु राम्रो राख्दछ र कहिले तनाव कम गर्दछ र दिमाग राम्रो बनाउँछ ।
शारीरिक श्रमको बेला जति ऊर्जा खर्च हुन्छ उति नै मेटाबोलिक इक्विवेलेटद्वारा त्यसको मापन हुन्छ । उदाहरणको लागि, एक कम असरवाला एरोबिक व्यायाममा ५ एमइटी ऊर्जा खर्च हुन्छ । सन् २०१६मा गरिएको अर्को अनुसन्धानले दाबी गर्‍यो कि नियमित सेक्स गर्ने महिलालाई ह्रदयको समस्या हुने सम्भावना कम हुन्छ । जबकि यस अध्ययनमा एक चेतावनी पनि थियो। अत्यधिक यौन गतिविधिले कहिलेकाहीँ पुरुषहरूमा मुटुको समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। यद्यपि यस तथ्यले केही विगतका अध्ययनहरूको विरोधाभास जनाउँछ । त्यसकारण धेरै व्यक्तिहरूले ‘सुरक्षित’ हुन सल्लाह दिन्छन् कि यदि एक पार्टनरलाई हृदयमा समस्या छ भने डाक्टरसँग परामर्श लिन राम्रो हुन्छ।
वैज्ञानिकहरूले सेक्सबारे अर्को अनौठो खोज पनि पत्ता लगाए । उनीहरूले पुरुषहरूको प्रोस्टेट क्यान्सरको सम्बन्धमा यौनको राम्रो गुण पत्ता लगाए । वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि करिब ३० हजार पुरुषहरूबारे अनुसन्धान गरेका छन् । नतिजाअनुसार एक महिनामा ६–७ पटक वीर्य स्खलन गर्ने पुरुषको तुलनामा २१ पटक विर्य स्खलन गर्ने पुरुषहरुलाई प्रोस्टेट क्यान्सर हुने सम्भावना कम देखाउँदछ । (नवभारत टाइम्स)